ရွှေရောင်အဝိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ရွှေရောင်အဝိုင်း (ရုရှား: Золотое кольцо;) ဆိုသည်မှာ ရုရှားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်မော်စကိုမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ရှေးဟောင်းမြို့များကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားများ တဆက်တည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ထားသော ရှေးဟောင်းမြို့များကို ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဆွဲထားသော အဝိုင်းဖြစ်သည်။ ဇာလျဲ့စကီးဟု ယခင်က ခေါ်ခဲ့သော ဒေသများကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုရှေးဟောင်းမြို့များသည် ရုရှားအော့သိုဒေါ့ ဘုရားကျောင်းတော် တည်ထောင်သောနေရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ သမိုင်းအတွက် အရေးပါသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော နေရာများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမြို့များတွင် ကရင်မလင်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် ဘုရားကျောင်းများ အပါအဝင် ၁၂ ရာစုမှ ၁၈ ရာစုအထိ ရုရှားလူမျိုးတို့၏ တုနှိုင်းဖွယ်ရာ ဗိသုကာလက်ရာများ တည်ရှိရာ နေရာများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမြို့များသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ကြည့်ရှုချင်စရာ ပန်းချီကားချပ်သဖွယ်ရှုမျော်ခင်းများနှင့် ရုရှားတို့၏ နာမည်ကြီးလှသော ကြက်သွန်ဥသဏ္ဌာန် အမိုးခုံးများကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်နိုင်သော နေရာများလည်း ဖြစ်ကြသည်။
ကိုတာရာ့စ်မြစ်မှ ယာရိုစလဗာလ်မြို့အား ရှုမြင်ရပုံ
၁၇ ရာစု ရုရှားအနုပညာလက်ရာ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော ကာစတျာမာရှိ ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်း ဘုရားကျောင်း (၁၆၅၂) (ရောင်စုံဓာတ်ပုံ၊ en:Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii, 1910, ကွန်ဂရက်စ် စာကြည့်တိုက်)
ယာရိုစလဗာလ်၊ ကာစတျာမာ၊ အီဗန်နိုဗာ၊ ဆူဇဒါး၊ ဗလာဒီမီယာ၊ ဆီဂီးယဲ့ဗ် ပါဆဒ်၊ ပီရီစလဗာလ်-ဇာလျဲ့စကီး၊ ရပ်စတော့ဗ် ဗျယ်လီကီး စသော အဓိကမြို့ ရှစ်မြို့မှလွဲ၍ မည်သည့်မြို့များသည် ဤရွှေရောင်အဝိုင်းအတွင်း ပါဝင်သည်ကို တရားဝင် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ အီဗန်နိုဗာ၊ ဗလာဒီမီယာနှင့် ယာရိုစလဗာလ်နယ်များရှိ အခြားသော ရှေးဟောင်းမြို့များ ဖြစ်ကြသော ပါလျဲ့ချ်၊ ပလျှို့စ်၊ ရှုရာ (အီဗန်နိုဗာ ဒေသကြီး)၊ ဂေါ်ရာဟာဗျဲ့စ်၊ ဂူ-ဟရုစတာလ်နီး၊ ယူရ်ယဲ့ဗ်-ပိုးလ်စကီး၊ မူရွန် (ဗလာဒီမီယာ ဒေသကြီး)၊ ရီးဘင်စ်က်၊ တူတာယဲ့ဗ်၊ အူဂလိချ် (ယာရိုစလဗာလ် ဒေသကြီး) တို့သည် ၎င်းမြို့များလည်း ရွှေရောင်အဝိုင်းအတွင်းပါဝင်သည်ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ယူဆကြသည်။
ဆဲဂီးယဲ့ဗ် ပါဆဒ်ဟာ မော်စကို ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရွှေရောင်အဝိုင်းအတွင်းပါရှိသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဆဲဂီးယဲ့ဗ် ပါဆဒ်တွင် ယူနက်စကိုမှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော Troitse-Sergieva Lavra ဘုရားကျောင်းတည်ရှိပြီး ထိုဘုရားကျောင်းကို သူတော်စင် ဘုန်းတော်ကြီး ဆဲဂီယပ်စ် ရာဒိုညဲ့ရှ်စကီးမှ ၁၄ ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီ လာဗရာဟာ ယခုအခါ ရုရှားလူမျိုးတို့၏ အရေးအကြီးဆုံးသော ဘာသာရေးနယ်မြေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စိန့်ဆဲဂီးယပ်စ်သည်လည်း ရိုသေလေးမြတ်ဖွယ် ရုရှားလူမျိုး သူတော်စင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပီရီစလဗာလ်-ဇာလျဲ့စကီးသည် ရုရှားသူရဲကောင်း၊ မင်းသား၊ သူတော်စင်အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားသော အလက်ဇန်းဒါး ညဲ့ဗ်စကီး၏ မွေးရပ်မြေ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူသိများထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ထိုဒေသတွင် ဂုဏ်တင့်၍ ဝံ့ကြွားဖွယ်ရာ ၁၂ ရာစုမှ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၆ ကျောင်းတည်ရှိရာ ၄ ကျောင်းမှာ ယခုအချိန်ထိ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။
ရပ်စတော့ဗ် ဗျယ်လီကီးသည် ကြီးမြတ်သော ရက်စတော့ဗ်မြို့ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီးထိုသို့ ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ အခြားသော အမည်တူမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော ဒွန်းမြစ်ပေါ်မှ ရပ်စတော့ဗ်မြို့နှင့် ကွဲပြားစေလို၍လည်းဖြစ်သည်။ ထိုမြို့သည် ရုရှားနိုင်ငံရှိ မြို့များထဲတွင် သက်တမ်းရှည်ကြာဆုံးသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးရည်ညွှန်းသော သမိုင်းအထောက်အထားမှာ ၈၆၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် စွဲမြဲစေသော မြင်ကွင်းမှာ ညဲရိုကန်နံဘေးတွင် တည်ရှိနေသော အဖြူရောက်ကျောက်တုံးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ကရင်မလင်ပင် ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ထိုကရင်မလင်အား ပြတိုက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိသည်။ မြို့ထဲတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ပြတိုက် သုံးခုရှိပြီး ၎င်းတို့သည် မြို့အား နာမည်ကျော်ကြားစေခဲ့သော ကြွေထည်ဆေးခြယ်သော အနုပညာအား ပြသရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ယာရိုစလဗာလ်မြို့သည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ရွှေရောင်အဝိုင်း၏ မြို့တော်အဖြစ် ဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် ယာရိုစလဗာလ်မြို့သည် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွအနှစ်နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့အား ၁၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဉာဏ်ကြီးရှင် ယာရိုစလဗ်မင်းသား တည်ထောင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး သူ၏အမည်အား မြို့အမည်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ကြသည်။ မြို့၏ အဓိက ရှုချင်စဖွယ်မြင်ကွင်းမှာ စပါဆာ-ပရီအာဘရာရှန်းစကီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပြတိုက်အဖြစ်ပြုရာထားရာ ထိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းတွင် ကျော်ကြားလှသော St Elijah the Prophet’s Church နှင့် John the Baptist’s Church တည်ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းနှစ်ခုလုံးကို လှပလှသော နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။ ယာရိုစလဗာလ်မြို့ကို မောစကိုမှ အထူးအမြန်ရထားဖြင့် လေးနာရီလောက်အတွင်း သွားရောက်နိုင်သည်။
ကာစတျာမာသည် မော်စကိုမြို့ကဲ့သို့ပင် ကာစတျာမာမြို့အား မင်းသားကြီး ယူရီ ဒါဂါရုကီးမှ ၁၂ ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မြို့သည် အီပါကျဲဗ်စကီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိနေခြင်းကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ရိုမန်နော့ဗ်မင်းဆက်နှင့်ဆက်နွယ်နေပြီး ပထမဆုံး ရိုမန်နော့ဗ်ဇာဘုရင်ဖြစ်သူ မိုက်ကယ် ဖရိုဒြာဘီချ်အား ထိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာပင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဇာဘုရင်အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ကာစတျာမာသည် ရွှေရောင်အဝိုင်းအတွင်းရှိ မော်စကိုမြို့နှင့် အဝေးဆုံးတွင် တည်ရှိနေသာ မြို့ဖြစ်ပြီး မြို့တော်မှ ညရထားဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည်။
အီဗန်နိုဗာသည် ရွှေရောင်အဝိုင်းအတွင်းပါဝင်သော မြို့များထဲမှ မြို့သက်တမ်းအငယ်ဆုံးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ အများဆုံးတည်ရှိနေသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဤမြို့သည် ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် ရွာနှစ်ရွာအား ပေါင်းပြီးနောက် မြို့သစ်တည်ခဲ့သဖြင့် ယခင်က ဤမြို့အား Иваново-Вознесенск ဟု လူသိများသည်။ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးစည်ပင်လာခြင်းဖြင့် မြို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ဒွန်တွဲလျက်ရှိပြီး ဤမြို့အားလည်း Bride City နှင့် ရုရှား မန်ချက်စတာမြို့ဟု ကျော်ကြားလာစေခဲ့သည်။
ဆူဇဒါးတွင် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများစွာရှိရာ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လျော့ပါးလာခြင်းနှင့် မူလအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆူဇဒါးကို ဖွင့်ထားသော ပြတိုက်ဟူ၍လည်း တခါတရံခေါ်ဆိုကြသည်။ ရှုချင့်စဖွယ်များစွာရှိရကား ထိုသည်တို့ကို ဗလာဒီမီယာနှင့် ဆူဇဒါး၏ အဖြူရောင်ကျောက်တုံးအထိမ်းအမှတ်များအဖြစ် ယူနက်စကိုမှ ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အထူးလေ့လာဖွယ်အထဲတွင် ယခုအခါ ပြတိုက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော စပါဆာ-ယဲ့ဖ်ဖီးမီးယဲဗ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ကရင်မလင်တို့ ပါဝင်သည်။ ထပ်မံ၍လည်း ဤမြို့တွင် အခြားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း လေးခုလည်း ရှိသေးသည်။
ဗလာဒီမီယာသည် အလယ်ခေတ် ရုရှားတို့၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သမိုင်းအရ အရေးပါသော မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ မြို့နီးချင်းဖြစ်သော ဆူဇဒါးမြို့ထက် အတော်အသင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ များပြားခဲ့သော်လည်း မြို့တွင်ရှိသော ရွှေတံခါး (Golden Gates)၊ စိန့်ဒမီထရီးရပ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း(St Demetrius’Cathedral) နှင့် Dormition Cathedral တို့သည် ယူနက်စကိုမှ ကာကွယ်ပေးထားသော ရှေးဟောင်းရုရှားဗိသုကာလက်ရာ၏ အကောင်းမွန်ဆုံးသော မူလလက်ရာများ ဖြစ်ကြသည်။
ထိုမြို့များထဲမှ အများစုကို M8 အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ လမ်းတလျှောက်တွင် တွေ့နိုင်ပြီး မော်စကိုမြို့ရှိ ယာရိုစလဗ်စကီး ဘူတာရုံ မှတဆင့်လည်း သွားရောက်နိုင်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ ရွှေရောင်အဝိုင်းသို့ လည်ပတ်ပုံလမ်းညွှန်: ယေဘုယျ၊ ကြ၊ နေ့ခရီး၊ လမ်းညွှန်၊ ခရီးသွားမြေပုံ(English)
ရုရှားနိုင်ငံ ရွှေရောင်အဝိုင်း: ဓာတ်ပုံ၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ မြေပုံ Archived 25 August 2012 at the Wayback Machine. (Russian)
ရွှေရောင်အဝိုင်းခရီးစဉ် ယေဘုယျဖော်ပြချက် Archived 29 March 2013 at the Wayback Machine.
ရုရှားနိုင်ငံ ရွှေရောင်အဝိုင်း (အင်္ဂလိပ်နှင့် ရုရှားဘာသာဖြင့်)
ရွှေရာင်အဝိုင်းသို့ ခရီးသွားခြင်း Archived 14 August 2016 at the Wayback Machine.
Wikivoyage ရှိ ရွှေရောင်အဝိုင်း သို့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေရောင်အဝိုင်း&oldid=727959" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။